Misimisy Kokoa Tamin’ny Fanadihadian’ny BBC Mikasika Ny Fandrahonana Blaogera Afgana · Global Voices teny Malagasy
Misimisy Kokoa Tamin'ny Fanadihadian'ny BBC Mikasika Ny Fandrahonana Blaogera Afgana
Voadika ny 29 Novambra 2017 15:23 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny Jolay 2005)
Tohizan'ny BBC hadihadiana ny mikasika creo fitarainana nataon'ny blaogera Afgana iray, Sohrab Kabuli hoe nisy nandrahona azy tao anatin'ny rafitra informatikan'ny solosainan'ny BBC. Ity manaraka ity ny fanambaràna farany nataon'ny BBC:
“Nohadihadian'ny BBC ny mikasika ny fitarainana matotra hoe nisy imailaka manafintohina nalefanà mpiasa iray avy ao amin'ny biraon'ny BBC ao Kaboul. Tena faran'izay am-pahamalinana tanteraka no anaovanay azy. Resy lahatra izahay fa ny karazana serasera toa an'io dia mifanohitra tanteraka amin'ireo fitsipika misy ao amin'ny BBC ary tsy ho azo ekena velively raha toa ka avy aminà mpiasa ao amin'ny BBC. Mampanao fanadihadiana maika ao Londra sy Kaboul izahay mba hahafantarana raha avy ao amin'ny BBC tokoa ireo imailaka ireo.
Hatreto, tsy nahitanay porofo mihitsy ny fisianà fitondrantena tsy mendrika na mandrahona nataon'ny mpiasanay tamin'i M. Sohrab Kabuli izay nanao ilay fitarainana. Manohy manao fanadihadiana mikasika ilay fitarainana ny BBC ary hitondra ireo vokatry ny fanadihadianay raha vao mahazo fanampim-baovao azo antoka. Saingy hatreto, mbola mamerina manamafy ihany izahay fa hatreto dia tsy nahita porofo amin'ny fitondrantena mandrahona an'i M. Kabuli nataon'ny mpiasa ao amin'ny BBC.”